PressReader - Ilanga: 2017-11-06 - Shenge, uyindoda emadodeni
Shenge, uyindoda emadodeni
Ilanga - 2017-11-06 - Imib - Ibhalwe ngu: Mbali Mhlungu E-VRYHEID
MHLELI: Kwelakho elishona nezindaba zalo, bengicela ungiphe isikhala ngidlulise ukudabuka kwami ngokwehla koMntwana waKwaPhindangene (iNkosi Mangosuthu Buthelezi) ekuholeni iNkatha Freedom Party (IFP).
Yebo, ngiyavuma ukuthi ubengeke abe ngumholi ingunaphakade, ukuba ngiyazenzela ngabe ngihlehlisa iminyaka yakhe yokuzalwa ngiyibuyisele emuva. Ubuholi bakhe kimi kabukaze bube nechashaza selokhu waqala ukuhola iqembu ngesikhathi lisungulwa mhla zingama-21 kuNdasa (March) we-1975. Kusukela lapho akaze alandelwe yiphunga lenkohlakalo.
Ukumela kwakhe abantu ngokubeka imibono ephusile ePhalamende kumbeka obala kuhle kwekati elimhlophe ehlungwini ukuthi ubengagcini ngokuba ngumholi weqembu eliphikisayo kodwa ubephikisa ngokubeka uthando lwezwe lethu phambili.
Bekwala noma abanye abaholi bephazamisa uMengameli waseNingizimu Afrika uma ethula inkulumo yesizwe, ubesukuma uShenge akhuze umsindo bese bemlalela behlele ngezansi.
Ukwenqaba kwakhe ukusayina isivumelwano sikazimele-geqe KwaZulu kwakhombisa ukuthi akacabangeli into yamanje kodwa ucabangela into yangomuso.
Bekwala noma abanye abaholi bemgcona, bemcokofula, bezama ukumbhixa ngodaka emehlweni bakhulume izinto ezingamampunge ngaye, ubekwazi ukuziphendulela aze abakhumbuze ukuthi kwaba nomhlangano endaweni ethile aze asho ngisho unyaka imbala, acaphune namazwi akhulunywayo.
Lokhu kusho ukuthi uyinqolobane yesizwe eyohlale ichichima ukudla kwenala ngesikhathi sendlala. Inhlonipho yakho obuyikhombisa kwabanye abaholi nakuba bona benenzondo namagqubu ngawe, ibingethusa kakhulu mina uze ubabize “mhlonishwa”, ungababizi ngamagama yize beyizingane eziluhlaza kuwena kodwa bona kubehlula lokho bavele bakugagule ngegama lasendlini kwenu.
Ngokweminyaka ngimncane kakhulu, ungumkhulu kimi yingakho ngiguqa nginxusa ihhovisi leNkatha noma umhleli wephephandaba iLANGA ukuba bafezekise iphupho lami leminyaka lokuthi ngikubone ngamehlo enyama noma kungaba yimizuzu eyisihlanu nje, lokho kuyosho lukhulu kimi.
Uke ungixhawule, ungiphe isibusiso sokuba ngumuntu oqotho emhlabeni. Ngisacela ukukuhasha kafushane:-
“Imbabazane ehaqe amadoda emasendeni Umlilo osh’ pheka khothe, Washunqela abasekhaya konina. Usungulo oluzibunubunu, Iququ lempongo yakithi ekuShumayeleni Umhlakazanhlansi zonke zibashise, Ihwanqa lakithi KwaPhindangene Ebelilihle njengengane.
Isibhamu esiqhume phezu kweNgwa vuma Kwazamazama izintaba Zobombo Wabaleka uMbabane ezalwa kwaNya wo. Nongawuzane ukhahlele ibhakede, Ukhahlele Arch-Bishop Desmond Tutu Wahlehla nyovane kuhle kukaNi- khodimu kwezingcwele Kwaxega okhololo koFrank Chikane; Mdidi wezibayabaya - I-UDF, iCosatu ne-ANC - zonke ngomthandazo
INKONDLO EBHEKISWE ENKOSINI MANGOSUTHU BUTHELEZI ENGUMENGAMELI WENKATHA FREEDOM PARTY (IFP) Uyibekile induku ebandla
Izitha zakho kwipolitiki Zisifundise umlando ongekho ngawe, Izitha zakho kwipolitiki Zisitshele ukuthi ungicijimpi kwe likaMthaniya Kepha ephalamende izinkumbi zabantu zithi Ungulethukuthula.
Izitha zakho kwipolitiki Zisitshele ukuthi ubungekho Kulwiwa nobandlululo ezweni Kepha zona zabe zihleli ntofontofo phesheya UNdabezitha elwela Isithunzi somuntu ompisholo esiwubukhosi.
Izitha zakho zepolitiki Zithi kawunandaba nemfundo yengane empisholo Kepha sizibonile izithukuthuku zakho Zibeka isenti phezu kwelinye Ukuze ingane empisholo ilunguze kwanqondonkulu.
Sibusisekile isisu esabe sikuthwele Abusisekile ama-Afrika ngawe, Bubusisekile ubukhosi base-Afrika ngawe Ibusiselile indawo yasoNdini olumahlikihliki Olwahlikizwa ngamaNgisi Efuna ukuntshontsha izwe likaZulu. Sibusisekile isizukulwane sase-Afrika Ngenxa yobuqotho bakho.
Uliqhawe lamaqhawe ase-Afrika Afana noMangaliso Sobukwe noKwame Nkrumah Uliqhawe lamaqhawe ase-Afrika Elanceliswa inhlonipho ngamaqhawekazi Ngamakhosazana aKwaZulu. Uliqhawe lamaqhawe Abeke umlando we-Afrika Ebalazweni lomhlaba ngobuhlakani bakho.
Sikufisela umhlalaphansi omuhle siyintsha yase-Afrika Mbabazane emahaqa Ehaqe amadoda emasendeni. Sikufisela umhlalaphansi omuhle Singamakhosi ase-Afrika Shenge! Sokwalisa!
Sikufisela umhlalaphansi omuhle Singamaciko acikozayo, Sinethemba uzocikoza nathi. Sikufisela umhlalaphansi omuhle singosopolitiki, Sizokukhumbula lapho silwa Sibanga ithambo elingenanyama Ngoba wena ubusilamula.
Uyibekile induku ebandla le-Afrika Ndabezitha!
Siyanda Godlinja Khanyi eTholakele, EDUMBE